Qaabka Sheekooyinka Instagram | Hal-abuurka khadka tooska ah
Qaabka sheekooyinka Instagram
Encarni Arcoya | 28/03/2022 19:33 | Dhiirrigelinta
Instragram waa mid ka mid ah shabakadaha bulshada ee ugu kobcaya tan iyo markii la abuuray. Markii hore, waxa isticmaali jiray oo kaliya dhalinyarada, laakiin wax yar oo shirkado ah ayaa soo galayay si ay u iibiyaan alaabadooda. Waana meesha, naqshadeeye garaaf ahaan, aad ka soo gali lahayd. Maxaa dhacaya haddii shirkad ay ku weyddiiso inaad ololaha sawirka Instagram ka sameyso? Waa inaad barataa iyaga, laakiin ka waran haddii aad ku sameyso qaab-dhismeedka sheekooyinka Instagram?
Taas waxa aad siin lahayd bandhig wanaagsan oo aad ka heli lahayd si uu u arko sida sawirkaasi uu dhab ahaantii ugu eegi lahaa profile-kiisa. Haddaba sidee ku saabsan tahay inaan ku tusino qaar ka mid ah qaababka sheekada Instagram?
1 Waa maxay sheekooyinka Instagram
2 Waa maxay sababta loo isticmaalo sheekooyinka Instagram?
3 template sheeko instagram
3.1 template sheeko instagram
3.2 template for cyber Isniinta
3.3 template sheeko instagram
3.4 wax ka beddel.org
3.5 Qaababka Sheekada Instagram
3.6 qaababka xayeysiiska
3.7 Sheeko iyo qoraal isku dhafan
3.8 Xirmada Sheekooyinka Instagram
Waa maxay sheekooyinka Instagram
Markii Instagram bilaabay, waxa kaliya ee ay ahayd inaad sameyso waxay ahayd sawir iyo qoraal. Wax kale ma jiraan. Run ahaantii, ma uusan ogolayn wax intaas ka badan. Laakiin, waqti ka dib, astaamo taxane ah ayaa lagu daray, ugu dambeyntii, ka dhigay dad badan inay doortaan shabakadan bulshada.
Mid ka mid ah daabacadahaas waa sheekooyin Instagram. Maxay qabtaan? Marka akoonku leeyahay sheeko, sawirka profile-ka waxa lagu duuduubay xuduud buluug ah. Markaad gujiso, daabacaad toosan ayaa soo baxaysa oo soconaysa dhawr ilbiriqsi oo kaliya, laakiin aad ku xidhi karto xiriiriye, geliso emoticons, weedho, fariimo, iwm.
Ahaanshaha maaddo firfircoon oo is-dhexgal leh, waxay soo jiidataa dareen badan shirkado badanina wali ma isticmaalaan 100%. Kuwa sameeya waxay had iyo jeer isha ku hayaan naqshadeeyayaasha ololahooda, si ay u soo jiitaan dareenka dhagaystayaashooda.
Waa maxay sababta loo isticmaalo sheekooyinka Instagram?
Dad badan ma isticmaalaan sheekooyinka Instagram, haddana aad bay faa'iido ugu yeelan karaan shirkadaha. Waana taas, Instagram-ka, ma dhigi kartid maqaallo. Xidhiidhiyadu waxay ku shaqeeyaan oo kaliya profile-ka oo si joogto ah u beddelka xidhiidhka waa mid aan macquul ahayn.
Maxaa la sameeyaa haddaba? Fudud, isticmaal sheekooyinka. Shirkaduhu waxay soo gelin karaan sawirro la diyaariyay oo maqaalladooda ah, marka lagu daro profile-ka, waxay la geli karaan sheekooyinka iyaga oo markaa ku xiraya iyaga si ay ugu fududaato isticmaalayaasha inay galaan maqaalkaas iyagoon u baahnayn inay raadiyaan.
Markaa, codsiyada qolo saddexaad midkoodna lama isticmaalo (taas oo Meta aanay jeclayn wax badan) oo tirakoobyadu si dabiici ah ayay kor ugu kici karaan.
template sheeko instagram
Ma xasuusataa tan sare? Nashqadayaasha ololayaashooda? Hagaag, taasi waa meesha aad ka geli karto, maadaama ay noqon karto mid xiiso leh inaad u muujiso soo jeedintaada macaamiisha, ku samee qaab-dhismeedka sheekooyinka Instagram. Waa naqshad u ekaysiisay shabakada bulshada oo ka dhigaysa mid dhab ah.
Sidaa darteed, halkan waxaa ah fikrado aad isticmaali karto.
Waxaan ku bilaabaynaa qaab-dhismeedka kaas oo ku siinaya fursado badan oo aad ku abuuri karto naqshadahaaga. Wadar ahaan waxaa jira ilaa 20 qaab oo loo isticmaali karo dukaamada dharka ama badeecadaha guud ahaan.
Faa'iidada ay leeyihiin waa inay ka tagaan meelo badan, labadaba sawirada iyo qoraalka.
Waad helaysaa Halkan.
template for cyber Isniinta
Sidaad ogtahay, dukaamo badan ayaa hadda sameeya xayeysiisyo loogu talagalay Black Friday, Cyber ​​​​Isniinta ... Hagaag, kiiskani wuxuu diiradda saarayaa taariikhdaas ugu dambeysa iyo qaybta moodada iyo qalabka.
Hadda, ma aha oo kaliya faa'iido u leh taariikhdaas, laakiin qaar kale oo badan, kaliya waa inaad wax ka beddeshaa oo aad u habeysaa sida aad jeceshahay. Waxaad ka heli doontaa 10 qaab, dhamaantood PSD.
Waad haysaa Halkan.
Dhab ahaantii ma aha mid keliya ee waa baakidh ay ku jiraan dhowr ka mid ah. Inta badan waxay noqon doontaa madow iyo caddaan, ama madow cad iyo dahab. Waxaad meel dhigi kartaa sawir iyo qoraal. In kasta oo iyaga loo xayeysiiyo oo kaliya moodada, runtu waxay tahay inaad sidoo kale u isticmaali karto qaybaha kale, waa arrin ku saabsan tafatirka PSD oo beddelo waxaad u baahan tahay.
wax ka beddel.org
Xaaladdan oo kale waxaan dooneynaa inaan si qarsoodi ah u galno bog aad ku abuuri karto qaabab bilaash ah Sheekooyinka Instagram. Xaqiiqdu waxay tahay inaad haysato qaar badan oo aad ka dooran karto, iyo qaybo kala duwan.
Kaliya waa inaad fiirisaa Halkan.
Qaababka Sheekada Instagram
Kuwani waxay diiradda saarayaan ololaha xayaysiinta, runtuna waxay tahay in aanay ahayn fikrad xun, maadaama qaar badan ay ku shaqaaleyn karaan sababtaas awgeed. Markaa tafaasiil yar iyo isbeddelo waxaad ku abuuri kartaa naqshado soo jiidasho leh.
Waxay kuugu iman doonaan PSD iyo AI labadaba si aad u isticmaasho barnaamijka tafatirka sawirka ee aad jeceshahay.
Xaaladdan oo kale, waa xirmo ay ku jiraan 30 sheeko oo Instagram ah, labadaba ganacsi iyo mid shakhsi ahaaneed.
Waxay leeyihiin nadiif ah laakiin isla mar ahaantaana naqshad qurux badan waxayna isticmaalaan waxyaabo kala duwan si ay u siiyaan muuqaal cajiib ah. Intaa waxaa dheer, sida uu sheegayo, waxay ku jiraan 5 naqshado gaar ah iyo kuwa ugu yar.
Sheeko iyo qoraal isku dhafan
Ma doonaysaa in daabacaadda profile kaaga iyo ka sheekaduba ay isku mid noqdaan ama ugu yaraan ay isku xidhan yihiin? Tani waxay fikrad wanaagsan u noqon kartaa wixii aan horay kuugu sheegnay shirkadaha doonaya inay iibiyaan ama xayeysiiyaan maqaallada blog-ka waana inay ka tagaan xiriirinta sheekooyinka si ay uga dhigaan mid la heli karo.
Xaaladdan oo kale waxaad yeelan doontaa naqshadeynta qayb kasta, oo leh monochrome iyo palette midab madow iyo caddaan ah.
Guud ahaan waxaad lahaan doontaa 40 fayl, 10 qoraal ah iyo 10 sheeko ah.
Xirmada Sheekooyinka Instagram
Tani waa mid ka mid ah xirmooyinka ugu waaweyn ee aad la kulmi doonto sababtoo ah waxay leedahay 135 sheeko sheeko oo Instagram ah. Xitaa haddii aan dhejiyo boodhadh, ha ka welwelin sababtoo ah waxay u eg yihiin cabbirka sheekooyinka.
Halkan waxaad ka heli doontaa noocyo badan oo kala duwan oo ay ku habboon yihiin nooc kasta oo shirkad ah oo sidaas darteed waxaad ku siin kartaa aragtiyo kala duwan oo isku mid ah si aad u dooran karto kuwa aad jeceshahay.
Dabcan, waxaad sidoo kale samayn kartaa naqshado adiga kuu gaar ah oo sidaas darteed waxaad abuuri kartaa wax asal ah. Laakiin haddii aad rabto inaad waqti badbaadiso oo aad sidoo kale si dhakhso leh u hesho shaqada, waxaad u soo bandhigi kartaa xulashooyinkan isaga oo arag haddii uu iyaga jecel yahay, ama aad u habayn karto adigoo haysta saldhig hore loo qorsheeyay.
Ma ku dhiiratay inaad sameyso qaab-dhismeedka Sheekooyinka Instagram?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Qaabka sheekooyinka Instagram
Sideen ugu samayn karaa GIF Instagram-ka